BitBose ibasa rakanaka uye rinovimbisa. Kunyanya kana yakabatana nezvimwe zviratidzo. kuti hukuru hwepurojekiti iyi ndeyo kuva nechiratidzo chayo, chinonzi BOSE kana TokenBose. Iyi ndiyo inoshandiswa mari yechikwereti uye yebhasi yeBitBose platform pachayo inobva ERC20. Kugadziriswa kwegadziriro hakusi kungochenesa uye kujeka, ne blockchain ethereum peer kune vezera vanogona kudya zvidiki zvishoma Mirairo inoberekwa uye yakadzidziswa kugadziriswa. Chimwe mamiriyoni mapurisa ane chisarudzo chemuvara panyika ino. Zvinhu zvose, asi hapana uye hapana mhinduro yekufambisa zviri nani kupfuura kare, mumusangano uyu, pamusoro pekuita uye kusimba nesimba rezvemari.
Sezvenguva dzose, simba uye kukwidza kwemapurojekiti mapva. Zita rake zvakare idzva, zvechokwadi zvinhu zvose zvichiri zvakashata uye zvakaoma pakatarisana nekambanikiti yezvino. Mune iyi yakanaka itsva Bose Bit project, anouya nekupa mashoko akanaka kune avo vanoda kuwirirana naye.
Unoda kuziva BitBose pamwe nesangano rayo iripo kuti uite sarudzo yakakwana yebhange. Kuvapo kwahwo hakungogadziri kungovhiringidza zvikwereti zvebhangi zvese asiwo kuchapa mikana yekutsvaga inobva pabhizinesi re blockchain iri pedyo neherehereum. Zvinhu zvinokosha zveBitBose
Basa reBitBose Platform nderekugadzira sangano rekugadzirwa kwebhengi rakagadziriswa risati razongoshandisa shanduko yebhangi yakajairika, asi ichapawo mikana yekutsvaga inobva pabhizinesi re blockchain.
Bose Chiratidzo ndicho chirevo che ERC20 based based BitBose platform uchishandisa blockchain ethereum, zvinoreva kushandiswa nekukurumidza zvakanyanya kutengeserana nemakomiti maduku. -Investment Banking Solutions Iri pepa rinopa hupfumi hunoita mari yekushandiswa kwemari, yakadai sePortfolio Funds, Crypto Loans, Mining Rewards Program.
Smart hybrid trade trading solutions for business and payment.
mari yedu yakasiyana mhinduro zvakagadzirirwa kuramba yakakwana liquidity nokuchinjana vamwe encryption uye cryptocurrency, izvo muchidimbu akashandurirwa ano rezvedzidzo mabhizimisi exchanges uye ano mubhadharo mhinduro.
The chikwata Kunoumbwa nyika-kirasi Developers, vatengesi, consultants zvemari, uye nyanzvi blockchain.
Bose Chiratidzo Fully inowirirana zvose mitemo, Compliance, KYC uye AML.
Pari zvino, unogona kutenga chiratidzo chako pa PRESALE ne 40%
mutsa Zvirongwa kuidzwa, Crypto Loans pamusoro BitBose akabvumira kuti mari iri crypto / crypto Fiat nekuchengeta navo chikuva muna BitBose.
Chirwere chekubhadhara chikwereti uye chikwereti chiri nyore, pakarepo kugamuchirwa uye pasina chekwere cheko. Gamuchira mari pakarepo yakatorwa kubhengi yako yebhangi.
Kukwikwidzana nhauriro yemari pasina mari inofanirwa mberi. Chengetedza mukurumbira wako uye uwane rusununguko rwemari. Mukuwedzera, hapachina mari yekuvhara nokuti iwe unogona kubvisa zvinhu zvako chero nguva.
Chiratidzo Chiratidzo –
BOSE Site – /www.bitbose.com/
Offer Type – Chiratidzo
Chiratidzo Chikutengeswa – 300,000,000
Mari Yakagamuchirwa – BTC, ETH, FIAT
ERC20 Chiratidzo – YES
Rigid Cap – $ 45 mamiriyoni
Kuti uwane mamwe mashoko
Website – https://www.bitbose.com/ Livre akabatizuru – https://s3.amazonaws.com/bitbose-documents/Update+bitbose+whitepaper-1.pdf Télégramme: https://t.me/bitbose Facebook: https://www.facebook.com/Bosetoken/ Twitter: https://twitter.com/Bitbosecoin
My Bitcointalk profile link:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1545555